ဆန် Destoner စက်
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကာလအတွင်း, က,pa သုံးစွဲမှု·ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ် tsurpas, ဆန်စပါးတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်အစားအစာသည်ထုတ်လုပ်မှုထက်ထုတ်လုပ်မှုထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာသည် , ရရှိလာတဲ့စားနပ်ရိက္ခာဟာတင်သွင်းမှုအပေါ်မှီခိုနေရမှုအပေါ်မှာအဓိကကျတယ်. အားဖြင့် 2014, နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်စားသုံးသောဆန်၏ထက်ဝက်ခန့်ကိုတင်သွင်းသည်. ဆာဟာရတောင်ပိုင်းအာဖရိကတွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည် (IN), နိုင်ဂျီးရီးယားသည်တိုက်ကြီးတွင်လျင်မြန်စွာဆန်တင်သွင်းသူဖြစ်လာသည်, ပိုမကြာသေးမီက, ဆန်တင်သွင်းမှုအပေါ် world.This ကြီးထွားလာမှီခိုနီဂျီယာ၏အစိုးရ၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်, ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်း မှစ၍ ပြည်တွင်းစပါးထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆန်ဖူလုံမှုရှိစေရန်အစီအစဉ်များစွာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်(သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသွင်းကုန်တိုးတက်မှုလျှော့ချရန်).
အထူးသဖြင့်, အစိုးရမှမကြာသေးမီကချမှတ်ခဲ့သောအဓိကမဟာဗျူဟာသုံးရပ်သည်ဆန်စပါးစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပြည်တွင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုတင်သွင်းမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိလာရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ကာလရှည်သက်သာချောင်ချိရေးအကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့သည်။:
1. ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျိုးစေ့များနှင့်အခြားခေတ်မီသွင်းအားစုများဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မွေးစားခြင်းအားဖြင့်စပါးထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်အစိုးရကဏ္ sector ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း.
3. ပြည်တွင်းဆန်ကဏ္ protect ကိုကာကွယ်ရန်တင်သွင်းခအခွန်များမိတ်ဆက်ပေးခြင်း.
နိုင်ဂျီးရီးယားသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်အတွင်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတင်သွင်းမှုနှုန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည် 1.1 ပြပွဲ, နိုင်ဂျီးရီးယား၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန်တင်သွင်းမှုမှမြင့်တက်ခဲ့သည်7မှ 21 ရာစု၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်ရာခိုင်နှုန်း 8.2 ဒေတာရရှိနိုင်ပါသည်သောအဘို့အလတ်တလောငါးနှစ်အတွင်းရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း (2008-2012). ထိပ်တန်းဆန်တင်သွင်းသူတွေထဲမှာ, နိုင်ဂျီးရီးယားကိုဖိလစ်ပိုင်ကအနီးကပ်လိုက်၏, အီရန်, အင်ဒိုနီးရှား, နိုင်ဂျီးရီးယားသို့အများဆုံးတင်သွင်းမှုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှဖြစ်သည်, ဗီယက်နမ်, နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ,အဘယ်သူသည်အတူတကွအကြောင်းကိုထောက်ပံ့ 60 ဆန်ရာခိုင်နှုန်း၏ရာခိုင်နှုန်းသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များ၌ရောင်း ၀ ယ်သည်.
ကမ္ဘာ့ဆန်စျေးကွက်အပေါ်မှီခိုမှုသည်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့်တိုင်းပြည်၏နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအရကျန်းမာစွာထိန်းထားနိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မူဝါဒများအပေါ်အလေးအနက်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။. စျေးနှုန်းများသိသိသာသာမြင့်တက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်, အဖြစ်မကြာသေးမီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဖြစ် 2008 စားနပ်ရိက္ခာအကျပ်အတည်း. အထူးသဖြင့်ဆန်အတွက်, စျေးနှုန်းများအကြောင်းကိုအားဖြင့်မြင့်တက်ခဲ့သည် 255 ရာခိုင်နှုန်းအကြား 2007 နှင့် 2008 ခုနှစ်, အတွက်နောက်ဆုံးအဓိကအစားအစာအကျပ်အတည်းထက်ပင်ပိုမိုမြင့်မား 1974, သူတို့တိုးလာသောအခါ 200 ရာခိုင်နှုန်း (Headey နှင့်ဝါသနာရှင် 2008).
အထက်ဆွေးနွေးမှုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပြသထားတယ်. အလုပ်အကိုင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်အဖြစ်စိုက်ပျိုးရေး၏အခန်းကဏ္။, စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှု, ကျေးလက်ဒေသ ၀ င်ငွေသည်အဓိကအားဖြင့်အာဖရိကတိုက်၏အဓိကမြစ်နှစ်စင်းဖြင့်နိုက်ဂျီးရီးယားရှိကြွယ်ဝစွာပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အမျိုးမျိုးသောစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာရှုခင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။, နိုင်ဂျာနှင့် Benue (ပုံ 1.1). ဤအဓိကမြစ်ကြီးနှစ်ခုနှင့်အခြားကြီးမားသောရေထုများကြောင့်နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်ရေချိုအရင်းအမြစ်များပေါများသည်. ကုန်းတွင်းပိုင်းကျယ်ပြန့်သောမြစ်များသည်ဤမြစ်နှစ်သွယ်တွင်မြစ်ဝှမ်းများဖြစ်သည်, ဒေသအလိုက်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်
သစ်ပင်ကြီး, သောဆန်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်. အခါအားလျော်စွာ, သို့သော်, မိုးခေါင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုများကြောင့်ရေသုံးစွဲနိုင်သည် (Kuku-Shittu et al. 2013).
သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsWikang FilipinoFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어PortuguêsEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
© 2012--2021 ဗစ်တာဆန်စက်သည်လက်ျာဘက်သိုထားရှိသည်